I-Lincoln Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Lithini Igama Lokugqibela Lincoln?
Igama elithi Lincoln ligama lokugqibela lithetha "ukusuka kolwandle lwase-koloni," okanye umntu ovela eLincoln, eNgilani. Igama livela kwi-Welsh element lynn , okuthetha "i-echibi okanye i-pool" kunye ne-Latin element element colonia , echaza "ikholoni."
Igama elinguNye igama elithi Spellings: LINCOLNE, LYNCOLN, LINCCOLNE
Amazwi Okuzonwabisa Ngegama Eligqityiweyo LINCOLN:
ULincoln igama elidumile elinikezelweyo eMelika, ngokuyinhloko linikezelwa ngozuko luka- Abraham Lincoln (1809-1865), umongameli we-United States ngexesha leMfazwe yaseMelika.
Abantu abaPhezulu abaneNkampani yeLINCOLN:
Abraham Lincoln - umongameli we-United States
URobert Todd Lincoln - ummeli waseMerika kunye nobhala wemfazwe; Indodana yokuqala kaMongameli Abraham Lincoln
UHenry Lincoln - umbhali waseBrithani kunye nomdlali
UBrad Lincoln - i-American Major League Baseball pitcher
Elmo Lincoln - umlingisi waseMelika, owaziwa kakhulu indima yakhe kwiifilimu ezininzi zeTarzan
Kuphi i-LINCOLN Igama lomninzi kakhulu?
Ngokwabhengezwa ngegama kwi-Forebears, igama leLincoln lixhaphake kakhulu eUnited States. Kuye kwafaneka kakhulu eNgilandi, e-Australia, eBangladesh, eGhana naseBrazil.
Iimpawu zamagama ukusuka kwiWorldNames PublicProfiler ubonisa igama leLincoln eMelika eliqhelekileyo eNew England eliseMassachusetts, eMaine naseNew Hampshire, kwakunye naseMontha. Noko ke, iiferensi ephezulu zeLincoln, kodwa zifumaneka eNew Zealand, ngokukodwa kwisithili sase-Waitomo, kunye naseTazmania, e-Australia.
Ngaphakathi kweNgilani, igama le-Lincoln ngoku lifumaneka ngokuqhelekileyo eNorfolk, kungekhona eLincolnshire.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name LINCOLN:
Amagama amagama kaMongameli wase-US kunye nokuThetha kwabo
Ingaba amagama abaMongameli base-US aba nenene ngaphezu kweS Smith yakho kunye noJones? Nangona ukunyuka kweentsana egama linguTyler, uMadison, kunye noMonroe banokubonakala bekhokelela kulolu hlobo, amagama angama-Ofisi kaMongameli ayenene nje yecandelo eliphambene ne-American melting pot.
Lincoln Igama lomsebenzi weDNA
Iinjongo zeprojekthi yeprojekthi yeLincoln kukuchonga nokulandelela amaninzi ahlukeneyo e-Lincoln njengoko kunokwenzeka, kubandakanywa nabalandeli beLincolns eMelika.
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injengekhaya laseLincoln okanye iingubo zeengalo zeLincoln. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-LINCOLN Inzala Yesizukulwane Seentsapho
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa komnxeba wefayili yeLincoln ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela isicelo sakho seLincoln.
I-FamilySearch - I-LINCOLN Genealogy
Hlola iziphumo ezingaphezu kwama-400,000 kwiiirekhodi zomlando ezichongiweyo kunye nemithi yentsapho exhamnene nomgca enxulumene nomnxeba weLincoln kule webhsayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
DistantCousin.com - LINCOLN Genealogy & History Family
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela uLincoln.
I-GeneaNet - iLincoln Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomnxeba waseLincoln, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
ULincoln Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanomnxeba weLincoln kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
Ngubani owafaka iBluetooth?
IJografi yoMlambo waseColorado
Indlela yokuphendula kwi-Joke yamaRoma
Indlela yokudibanisa "isikhephelo" (Ukumemeza, Ukumemeza) ngesiFrentshi
1960s I-Feminism Timeline
Inkcazo yeCoenzyme kunye nemizekelo
Isikhokelo seNgcaciso eDlula i-Stalker kwi-Movie History